मेरो लक्ष्य यूरोपको मैदान हो : सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ – Khabarhouse
Khabar house | ७ फाल्गुन २०७६, बुधबार ११:१९ | Comments
काठमाडौं, ०७ फागुन। सावित्रा भण्डारी नेपाली महिला फुटबलको परिचित नाम हो। राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’नामले पनि परिचित छिन्। सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडीको कीर्ति मान बनाएकी सावित्राले फुटबलमा छोटो समयमै लोभलाग्दो सफलता हात पारेकी छिन् ।
भर्खरै सम्पन्न भारतको ‘हिरो महिला लिग फुटबल’मा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उनी सर्वाधिक गोल कर्ता बनिन् । उनले आफू आबद्ध टीम गोकुलम केरेलालाई च्याम्पियन बनाउन कुल १६ गोल गरिन् । सावित्राको यस किसिमको सफलताको पछाडिको राज के हो त ? यो सफलता पछाडिको संघर्ष र उनको फुटबल करियर कसरी अगाडि बढिरहेको छ त ?
भन्ने विषयमा न्यूज २४ टेलिभिजनले आफ्नो नियमित प्रस्तुति ‘६ प्रश्न’माउनै सावित्रा भण्डारीसंग विशेष कुराकानी गरेको छ।भर्खरै मात्र भारतबाट नेपालीआइपुगेकी स्ट्राइकर साबित्राले टिभी जर्नलिष्ट बीरेन्द्र जैरुसंगको कुराकानीमा समग्रमा लिग आफ्नो लागि धेरै राम्रो भएको बताउँदै भनिन्, ‘गत सिजनमा पनि मैले जिकेएफसीबाट खेलेकी थिए । जसलाई मैले च्याम्पियन बनाएकी थिए ।
२०१९ लाई नै मैले निरन्तरता दिदै २०२० मा पनि गोकुलम केरेला लाई च्याम्पियन बनाउन सफल बने । स्ट्राइकरको रुपमा मैले हाइ स्कोररको रुपमा सपना बनाएकी थिए, जुनचाँहि मैले साकार पारे । जे होस् खुसी छु ।’ उनले थपिन्, ‘व्यक्तिगत परफरमेन्सको बारेमा भन्नुपर्दा मैले स्टार्टिङ फेजमा मलाई धेरै गाह्रो भएको थियो । टिमसँग घुलमिल हुन पाएकी थिइन । मैले एकैचोटी टुर्नामेन्ट खेले । मैले त्यहाँ ट्रेनिङ पनि गर्न पाइन ।
त्यहाँको टीमसंगै बसेर ट्रेनिङ गर्न पाएकी भए केहि हदसम्म बुझ्थे होला । तर, मलाई टीम कक्बिनेशन बुझ्नका लागि एक÷दुई म्याच धेरै कठिन भयो ।’ आफूले टीमसंग एक÷दुई म्याच खेलिसके पछि मात्रै टिम फर्ममा आएको बताइन् । गतवर्ष जस्तै यो वर्ष पनि गोकुलम केरेलालाई सफल बनाउन सफल भएकी हुनाले त्यहाँ पनि धेरै दर्शकहरु कमाएकी उनको तर्क छ । भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।